I-South Node kwiCancer: Impembelelo yoBuntu kunye noBomi - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana I-South Node kwiCancer: Impembelelo yoBuntu kunye noBomi
I-South Node kwiCancer: Impembelelo yoBuntu kunye noBomi
Abo bazalwe ngeNode yaseMzantsi eCancer banomdla wokuhlala nosapho kwaye bajonge ukuba bazive bekhuselekile ngokwasemoyeni, oko kuthetha ukuba banokuba nobunzima ekuphuhliseni ubomi babo bobuchwephesha.
Konke oku kungenxa yokuba banamathele kakhulu xa kuziwa emsebenzini. Ngapha koko, banokuncamathisela ngokugqithiseleyo kwiminyaka yabo emincinci, bebambelele kakhulu kwabanye kwaye baphephe ukuthatha naluphi na uxanduva.
I-Node yaseMzantsi kuMhlaza ngokufutshane:
Amandla: Uxanduva, oluchanekileyo kunye nokuzimisela
Imiceli mngeni: Uyazingca, uyakrakra kwaye uyazingca
Abantu abadumileyo: UCameron Diaz, uBen Affleck, u-Oprah Winfrey, uJohn Travolta, noMichael Moore
Imihla: Okt 10, 1953-Apr 2, 1955 Apr 28, 1972-Oct 27, 1973 Nov 19, 1990-Aug 1, 1992 Aug 22, 2009-Mar 3, 2011 March 27, 2028 - September 23, 2029.
Abemi beNode yaseMzantsi eCancer banokoyika ukwaliwa ngokugqithileyo, esi sisizathu sokuba baphoswe ngamathuba, singasathethi ke ngokujolisa kakhulu kwiimvakalelo zabo.
Ukuyeka ukuhamba kunye nokukhathazeka
Ukubekwa kweNdawo ekuMazantsi eCancer kubonisa ukuba aba bemi bomthonyama kufuneka bazame ngako konke okusemandleni ukuba babenolawulo kwaye babe noxanduva. Bangasola ixesha labo elidlulileyo ngaphandle kokucinga kakhulu, endaweni yokujonga ukuba yintoni ebangela ukuba bazive bengakhuselekanga kwaye yintoni emthombo weemvakalelo abanazo.
Oku kunokubathintela ekuqhubeleni phambili nasekuzithembeni. Ayisiyiyo into yokuba abafuni kukhuseleko, kodwa kukuba akufuneki baphinde baxhomekeke ukuze bakufumane.
Abantu abazalelwe ngeNode eseMazantsi eCancer bayazi kakuhle ukuba baziva njani, kodwa ukuba bafuna ukuvela, kufuneka babone umahluko phakathi kokuthamba nokuba noxanduva.
Abakwazi ukuthembela nje kwinto abaziva ngayo, nokuba bafuna kangakanani ebomini babo.
Kuyenzeka ukuba babhengezwe ngemizamo yabo ngaxa lithile, kodwa ukuze oku kwenzeke, kufuneka bayeke ukudlula kwabo kunye nobuntwana babo.
Aba bantu kufuneka babe neenjongo ezichanekileyo kunye nolwalathiso ngokunjalo, kuba le kuphela kwendlela yabo yokuzimela ngokwezimali nangokweemvakalelo, izinto abazifuna kakhulu.
Umphefumlo wabo uhamba uziva ukhuselekile ngokweemvakalelo kusapho ukuya ekufuneni isikhundla kwiqela okanye kwihlabathi.
I-South Node kwiCancer kwitshathi yabo yokuzalwa ibonisa ukuba banokuba ne-moody kwaye baxhomekeke kakhulu kwabanye.
Kuba le Node yenyanga ibonisa apho bavela khona ebomini babo kwaye mhlawumbi uninzi lweenkcukacha malunga nexesha labo lobomi elidlulileyo, kuya kufuneka baqwalasele ishishini labo elingagqitywanga, kunye nemikhwa ekungafanelekanga ukuba babe nayo.
Xa kukho intshukumo kwicala le North Node kwi 10thHouse yaseCapricorn, abantu babizelwe ukwenza izicwangciso, baqeqeshwe ngakumbi xa kufikwa ekufezekiseni iinjongo zabo kunye nokuthatha amanyathelo.
Akufuneki ukuba babambelele kubudlelwane babo kwaye bakhulule ukubamba komhlaza, ophathelene nosapho kunye nemvelaphi. Ngamanye amagama, kufuneka bazilungiselele umhlaba.
Kuqhelekile kubantu abane-South Node kwiCancer ukuba neengxaki ngexesha lobuntwana babo, nokuba abayamkeli.
Nokuba ubomi babo basekhaya bebungakhange busebenze kakuhle, basenokuziva ngathi abanelisekanga ngokwenzekileyo ekhaya, singasathethi ke ngokuba banokuba nobunzima ngokwakha usapho lwabo kamva ebomini.
Banokuziva zonke ezi zinto ngokungacacanga kwaye ixesha labo elidlulileyo kunokwenzeka ukuba linengxaki, ke lonke ixesha banethemba lokusombulula iingxaki zabo, ezinokubonakala zingenakwenzeka.
Ngaphezulu koku, banokwala ukuthatha naluphi na uxanduva kuba baxhomekeke kakhulu kusapho lwabo okanye kwiqela abalibona lifana nentsapho yabo.
Aba bemi babonakala ngathi bayathandwa ngabantu abaninzi, kodwa kufuneka bafumane iindlela zokuzibonakalisa ngendlela yokuyila, kunye nokwenza ixesha nabahlobo babo. Kusenokwenzeka ukuba uninzi lwabo lothusa abahlobo babo kunye nabantu ababaziyo ngempumelelo yabo.
Bangalandela abahluphekileyo nasemva kokuzibuza ukuba aba bantu basilele njani. Kwangelo xesha, bajonge ekwabelaneni nabanye ngezinto abazifunayo xa kufikwa kwintuthuzelo kwaye yintoni ebangela ukuba bangabikho.
Ngaphezulu koku, boyika ukubanjiswa xa umsebenzi wabo uqala ukuqhubela phambili kuba bahlala bebuyela kukhuseleko lwabo lwasekhaya.
Ngendlela efanayo, bayazibandakanya namaqela abangawathandiyo, ukubuyisela umanyano ekhaya.
Aba bantu banye bazalwa benesifo seCancer Node abanomvandedwa xa kusenziwa kumama wabo nakwintsapho ebakhulisileyo. Ukusukela ngoku ukuya kuthi ga ngoku, banokukhanyela ukukhutshwa abanako nonina.
Abanye banokuziva iintlungu zalo mfazi kakhulu kwaye abanandlela yokumenza azive ngcono.
Kungenxa yokuba baziva bengafanelekanga kwaye ayililo inenekazi elomeleleyo ababekholelwa kulo.
Igunyazisiweyo kodwa imvakalelo
I-South Node Cancers inokuba neentloni phambi kweli hlabathi likhohlakeleyo, ezoyika kakhulu. Kufuneka bakhuseleke kwimeko-bume enobutshaba nakwiimeko ezibi, ngakumbi xa bengayazi indlela yokuba ngabantu abadala kwaye bajongane nemiceli mngeni.
Kuya kufuneka bonwabele ukufumanisa izakhono zabo. Xa kufikwa kwinkxaso abayifumanayo kwabanye, iindlela zabo zakudala zokondla zibaqhuba ukuba batyale zonke izibonelelo abanazo ekuncedeni abanye bazalisekise amaphupha abo kwaye balibale ngeenjongo zabo.
Mhlawumbi bajonge ukunqanda ezinye izinto kwaye boyike imiceli mngeni, ndingasathethi ke ukuba banokuziva bekhathazekile xa belindile.
Uluvo apha kukuba bazenze basebenze kwaye benze intuition yabo isebenze xa kufuneka bezikhusele. Ngokuzenzekelayo, kufuneka bavumele iimeko zabanye kunye neqabane labo ukuba nefuthe kwindlela abanemveliso ngayo kunye nokuziphatha kwabo.
Banotyekelo lokuba babonakale xa bezama ukushiya onke amaphupha abo. Ngaphezulu koku, bangamaxhoba okwenyani ngeziqendu zemvakalelo, zivumela iimvakalelo ukuba zinike isantya sobomi babo.
Iindlela zabo ezibuthathaka zingasetyenziselwa ukuphucula unxibelelwano lomntu. Ubukrelekrele babo buneemvakalelo kunye neendlela zabo zokukhetha abahlobo babo.
Kunokuba ngumceli mngeni kubo ukuncama igunya labo okanye ukuba neemvakalelo zobuxoki. Kananjalo banokuba ngamakhoboka eembophelelo ezingezizo.
Ukuba kukho ukuxoxa ngakumbi malunga nobudlelwane babo, banokuvumela iimvakalelo zabo ukuba zibayalele ukuba zihamba njani.
Abantu abaneNode yaseMzantsi eCancer banokuqhubela phambili ngokuba lukhuni kwaye bazivumele ukuba badlule kwiimvakalelo ezininzi, kodwa ngaphandle kokuzibamba.
Kuya kufuneka basete imida esempilweni phakathi kwabo kunye nabanye, konke oku ngelixa beyinyani kwaye benobuntununtunu, kodwa kulawulo lweemvakalelo zabo.
Abemi abafanayo kunye ne-South Node kwiCancer banokuthi bahlaziye kwaye baphendule ngobuntwana kwizinto ezahlukeneyo okanye iimeko.
Ngamanye amaxesha bavumela iimvakalelo zabo ukuba zibalawule, bade babe behlelelekile.
loluphi uphawu ngoAprili 27
Ukuba abasakwazi kulawula, banokudinwa. Ngaphezulu koku, banokuba nehaba lokuphendula kwaye emva kokungazithandi ngokungakhuli.
Aba bantu banokuchitha ixesha labo kwaye bazisizele. Ukuba baziva bengakhuselekanga, baya kwabo babathandayo ukuze bathuthuzeleke, naxa beswele okanye bengaziva banele.
Ukuba novakalelo kakhulu kwiimood zabanye abantu, banokuxhalaba xa bengasondelanga ngokwaneleyo kubo, okanye xa bengazi ukuba kwenzeka ntoni entlokweni yabo.
Kukho amaxesha apho banesidingo sokusondelelana kwaye abanye abekho kwisikhephe esinye njengabo, umzuzu apho uMhlaza weSouth North uziva ucekisiwe.
Xa kufikwa kwidabi phakathi kobomi babo bobuqu kunye nobungcali, abanakuphuncuka kwimvakalelo yokuphantse basondele kunye nabahlobo babo kunye noogxa babo.
Ngesi sizathu, banokuthetha kakhulu ngobomi babo bobuqu kwaye banqwenele ukusondela, okunokubathintela ekuphuhliseni ubudlelwane obunempilo beshishini.
Ukuba unxibelelwano abalufunayo alukho, banokungayiqondi indlela yokuphuhlisa ubudlelwane obuqinileyo, nje ukuba boyise inqanaba lokuqala lokoyika kwabo.
Yintoni abantu bomthonyama abazalwe benayo iNode Node eCancer abangayiboniyo yindlela unxibelelwano lwabo lomntu olungabanyanzeli ngayo ukuba benze nantoni na. Ukuba azilawulwa ngokufanelekileyo nangona kunjalo, ezi zinokubenza bangabinakho ukuba yingcali kuba zizezobuqu.
Xa abantu abane-South Node kwiCancer beshiya ikhaya apho bakhulele khona, bafuna ukuyenza. Okukhona bekhula, kokukhona abantwana babo beqhubeka nokubabiza, kunye nosapho lwabo.
Lo mnxeba ungaphakathi entliziyweni yabo ubenza ukuba bahambe kancinci, kuba bahlala bejonge ukubuya. Yinto eqhelekileyo ukuba aba bemi beli babenamahla ndinyuka xa kufikwa kubomi babo bobuchwephesha, kunye nokuqala izinto kwakhona.
Oku kuthetha ukuba abaze balushiye usapho lwabo kwaye umntwana kubo kufanele ukuba abe mdala. Xa bevuthiwe, aba bantu banako ukusebenza ngokukuko.
Ngomhla woku-1 ku-Zodiac ziiPisces-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Indoda ye-gemini ethandana nomntu obhinqileyo
loluphi uphawu oluku-matshi 12
leo indoda capricorn ukuhambelana komfazi
I-aquarius yelanga umhlaza wenyanga ubuntu
Uphawu lweZodiac lwangoDisemba 7